Xildhibaan hore, Marxuum Boqorre oo la sheegay inuusan hal askarina haysan markii la dilayey – Kalfadhi
February 25, 2019 February 25, 2019 Kalfadhi
Geerida Xildhibaan hore, Marxuum Cismaan Cilmi Boqorre, waxay naxdin iyo murugo gocosho badan kaga tagtay Madaxda Golayaasha Dowladda iyo Xildhibaannada Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya. Ma ahayn Xildhibaan oo kaliya ee waxa uu soo ahaa Guddoomiye Kuxigeen Baarlamaan ay Soomaaliya lahayd 2004-2009. Meesha lagu dilay iyo sida loo dilayba waxay muujineysa inuu aad u dayacnaa Marxuumku. Sidaas waxaa isla qiray siyaasiyiin iyo shacab.
“Xildhibaanka oo aan kulanay dhawr isbuuc ka hor ayaa wuxuu ka walaacsanaa amnigiisa gaarka ah” ayuu Sanatar Xuseen Sh. Maxamuud ku yiri dhigaal uu kusoo qoray Feysbuuggiisa. “Maadaama Taliska Ciidanka Booliska ay ka kaxaysteen ciidamadii ilaalada u ahayd sida uu ii sheegay” ayuu hadalkiisa sii raaciyey.
Inuusan Xildhibaanku ilaalo wadan waxaa xitaa qiray deriskii uu la noolaa sanadihii dambe, oo maalin kahor hortooda lagu qaarijiyey. Isagoo ilmeynaya ayuu mid ka mid ah dadkii la deriska ahaa ku yiri TV Maxaliya “Noloshiisa meeshaanuu ku qaatay wax badan” . Ilmada oo ka sii da’aysa ayuu yiri “Wallaahi qalbigaan ka ooynayaa, ninkaas wanaagiisa iyo sida loo galay ayaan la yaabanahay”.
Dad kale oo la deris ahaa Xildhibaanka waxay sheegeen in sidooda oo kale uu iska ahaa Boqorre, oo aysan marnaba dareemin inuu Marxuumku u baqanayo amaankiisa. Waxay sheegeen inuu caawin jiray, niyadda u dhisi jiray, oo uu ku milnaa dadka xaafadda. “Wax badanuu nasoo gacan qabtay, oo uu deriska iyo masaajidka taageeray” ayuu yiri qof kale oo isla TV-gaas u waramayey, oo aan magaciisa la xusin.
Xildhibaanka waxaa la sheegay in ay rag ku hubeysnaa baastoolado ku dhex dileen hoygiisa oo uu dib u dhis ku waday maalmahaan. Isagoo u tagay inuu joornaatigooda siiyo dadkii guriga u dhisayey ayaa la sheegay in la dilay, mana uusan wadan xitaa hal askari oo u ah ilaalo, sida ay deriskiisu sheegeen. “Aad iyo aad ayaan uga naxay geerida Xildhibaanka, oo aan iskala tirsaneen Xisbiga Midowga Nabadda iyo Hormarka” ayuu yiri Sanatar Xuseen Sh. Maxamuud.
Boqorre waxa uu in muddo ah kasoo tirsanaa Ciidanka Xoogga Soomaaliya (CXS), waxaana la sheegay inuu ku dhaawacmay laba dagaal oo ay Soomaaliya la gashay Itoobiya (1964 iyi 1977). Saasdaradaadeed, waxa uu ka tirsanaa Guddiga Difaaca ee Golaha Shacabka ee Baarlamaanka 10-aad. “Waan ka xunahay (waxa ku dhacay Boqorre) maanta, isagoo u soo halhamay dalka, kusoo dhaawacay (dagaaladii) 1964-tii, 1977-kii” ayuu yiri Guddoomiyaha Guddiga Difaaca ee Golaha Shacabka, Xuseen Carab Ciise.
Xildhibaan hore, Marxuum Boqorre waxa uu lahaa cod fasiix ah, oo marka uu ka dhex qudbeynayo Golaha Shacabka uu ku taageeraa aragtiyadiisa caadifad soo jeedisa dareenka Xildhibaannada iyo dadka dhageysta hadaladiisa. Weerihii ugu saambeynta badnaa ee uu Kalfadhigii 4-aad ka dhex jeediyey waxaa ka mid ah ahaa “Walaalayaal, bal Illaah baan idinku dhaarshee, nin askariya oo dhaxan jiif ah, oo qorax joog ah, oo ay xabadi u dheer tahay ayaa waxaa la siinayaa boqol Doolar”. Taas ayaa muujineysa heerka dhibta iyo halista haysata ciidanka iyo sida uu Boqorre ula damqanayey daruufta askarta Soomaaliyeed.
Dad ku eedeysan dilkiisa ayuu Boolisku ku hayaa gacanta, kuwa kalena inuu ku baadi goobayo ayuu sheegay, warqad kasoo baxday Madaxtooyada Soomaaliyana waxaa lagu faray dhamaan laamaha amniga in ay si deg deg ah gacanta ugu soo dhigaan gacan ku dhiiglayaasha dilay Xildhibaanka, lamase ogaan karo hadda in dhamaan tilaabooyinkaas hordhaca ah ay ugu dambeyn suuragalin doonaan inuu Boqorre helo cadaalad.
20 Xildhibaanno dumar ah oo Turkiga ugu socdaalay barashada dib ugu soo noqoshada Baarlamaanka